Kukhona zilokazane, ukulawula okuyinto efana eyayizothatha isikhathi eside isinyathelo sezempi. isikali izinambuzane Tiny okuqondene suborder of coccidia, isusa izitshalo yakho ngakho ayilula kangako. Abadala zikhulisa ngakuyena ngomfanekiso igobolondo okuhlala ngokuphephile efihla kubo nokusondelana ahlukahlukene ezinobuthi. Kodwa lokhu akusho ukuthi kumelwe sinikeze esitheni. Ake ukubhekana nendlela yokubhekana ne izinambuzane esikalini, lusebenzisa noma iyiphi indlela, balimi zanqwabelana.
Indlela elula, yebo, uthwebule zokuhlala isikhashana nezilwane zakho abasha, kodwa ezihambayo, izinambuzane. Noma kunjalo, phawula eliyinkimbinkimbi kakhulu kunalelo esikalini izinambuzane efanayo iwe ezihlotsheni zethu ngokuhlakanipha coccidia ukuthi kubo. Mealybugs ezikhonjwe okungenani kalula "uvolo" ezimhlophe, futhi amnandi ezisalayo okunamathelayo okusalele Jose esikalini, ibonisa ukuthi umuntu usevele zigxilé bridgehead oluhlaza.
Kodwa ingabe esinganqobeki ngakho omdala Jose isikali ngempela? Indlela yokubhekana naso?
Kukhona zinambuzane, ezimisiwe ngokumelene lokhu inkathazo. Ngokwesibonelo, lesi sidakamizwa "aktellik". Iphunga akumnandi, kodwa libhekwa ubuthi njengoba kancane anobuthi, ngoba ungakwazi (ngokuqapha) ukusebenzisa egumbini. Futhi eziye zasetshenziselwa ukulwa coccid "Ragor", "Akhtar", noma "B-58". I last noma kunjalo ayikwazi ukusetshenziswa ku efulethini. Lokhu kuyingozi kakhulu! Lesi seluleko likuphatheleni "malathion", kodwa singazama yini ukusebenzela nalo ngaphandle kuphela.
Ngakho-ke senza ngaphandle ngokweqile bese uyazama ngaphezulu imali "lula", okuyinto asaba Jose esikalini. Indlela yokubhekana izindlela abantu sika? Indlela ephumelela kunazo - zokuvimbela. Ukunakekela izitshalo, njalo ahlole ngokucophelela amaqabunga iziqu, futhi ubona okuthile ukuthi libukeka ishq ubuntu kuphela, ngokushesha ubambe ngensipho namanzi isixazululo kanye uxubha izifiki kahle bengamenyiwe. Soap ubhekana izinambuzane omdala.
Kodwa akulona insipho olulodwa kwavala kugxilile Jose isikali on the lemon. Indlela nemacala eziphambili ngotshwala? Sithatha it 60% isixazululo, wagqoka pad ukotini futhi baqala ngobumnene bezihlikihla endaweni ethintekile. Kodwa khumbula, ngisho utshwala buhlanjululwe uyakwazi ashise isitshalo, ngakho inqubo kumele kwenziwe ebusuku noma esimweni sezulu esinamafu. Sun ukulimaza ukwelashwa kuphela.
Esikhundleni ikhambi wotshwala, ungasebenzisa iziketekete it is kakhulu ungathandi Jose esikalini. Indlela yokubhekana ngosizo ke? Njengoba esimweni sokuqala: manzi uhala e kaphalafini bayiqede isitshalo.
Ngezinye izikhathi kuyasiza gqwa sishaye ukumnika oqinile ugwayi, ugwayi. izinambuzane Young bayabulawa emva kokwelashwa izitshalo nge aqueous isixazululo lamafutha transformer.
Khumulani amahlamvu lapho esezinzile Jose esikalini. Indlela yokubhekana athutha nge izinambuzane? Kulula kabi - ngobumnene zizifunele "izikali" izakhi kulesi simila.
Ungakhohlwa ukwehlukanisa isilwane sasekhaya esigula lonke isikhala sakho oluhlaza, kungenjalo bayokudla maduze elalihlala inkathazo. Ungagxambukeli, ukwandisa siqaphile, ahlole ngokucophelela izitshalo zakho. Hlela ukuba ushawa masonto onke, ngokuzikhandla humidify emoyeni (ikakhulukazi ebusika), ungavumeli uthuli buthelela amaqabunga. Ngakho, uzodala izimo zokuphila babulawa ngoba coccid.
Butterfly Aporia Crataegi: elingenacala, kodwa ilimaze kakhulu ...
Repeller izimpukane ultrasound: izimiso ezisebenza, izinzuzo, izici ukusebenza
Colorado leaf beetle: incazelo emfushane nezindlela emzabalazweni
Imibuzo ongaqondile ngolimi lwesiNgisi: imithetho ukusetshenziswa nemfundo
Amathiphu ukulungiswa izikhangiso abanekhono